WARBIXIN: Frank Lampard Oo TODDOBA Ciyaartoy Ka Nadiifinaya Chelsea & Xiddiga Aysan Jamaahiirta Blues Rumaysan Karin Ee Ku Jira - Gool24.Net
WARBIXIN: Frank Lampard Oo TODDOBA Ciyaartoy Ka Nadiifinaya Chelsea & Xiddiga Aysan Jamaahiirta Blues Rumaysan Karin Ee Ku Jira
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard oo xilli ciyaareedkiisii koowaad ee kooxdaas mid guul ah lagu sifayn karo ayaa isha ku haya inuu tiraba toddoba ciyaaryahan ka diro Stamford Bridge kahor xilli ciyaareedka dambe.
Blues ayaa xaqiiqsaday booskooda UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka dambe kaddib markii ay booska afraad ku dhammaysteen halka ay caawa Final-ka FA Cup kahor tagi doonaan Arsenal.
Iyadoo ay tahay in Lampard uu dareemo waxqabadka wanaagsan ee kooxdiisa ee xilli ciyaareedkan 2019-20 haddana waa inuu ku xisaabtamo in waxa laga filayaa ay xilli ciyaareedka dambe sidan kasii balaadhan doonaan.
Chelsea ayaa xilli horeba si cajiib ah usoo xoojisay safka kooxdeeda ee xilli ciyaareedka dambe iyagoo lasoo saxeexday Timo Werner iyo Hakim Ziyech.
Kai Havertz oo Bayer Leverkusen ka tirsan ayaa sidoo kale si dhakhso ah ugu soo wareegi kara halka sidoo kale lala xidhiidhinayo saxeexyada Jan Oblak iyo Dean Henderson maadaama oo ay raadinta goolhaye cusub ku jiraan.
Haddaba, sida uu sheegayo wargeyska Daily Mirror, Lampard ayaa kooxdiisa ka diri doona xiddigaha kala ah Willian, Kepa Arrizabalaga, Michy Batshuayi, Jorginho, Emerson iyo N’Golo Kante oo si lama filaan ah uga dhex muuqda.
Kante ayaa ah mid kamida hantida ugu qiimaha badan ee Chelsea, si ka duwan ciyaartoyda qaar liiskan ku jira isaga wax shaki ahi kuma jiro inuu awood u leeyahay inuu u ciyaaro Chelsea.
Sidoo kale waxaan su’aali ka taagnayn in 29 sano jirkani uu koox kale wacdarro u dhigi karo xilli ciyaareedka dambe balse doorkan ayaa ku ahaa mid ay dhaawacyo dishoodeen isla markaana uusan ahayn mid sidii looga bartay u ciyaarayay marka uu ciyaarayo.
Goolhaye Kepa ayaa qaab ciyaareed xumo darteed kooxda looga fasaxayaa halka Willian Borges uu heshiiskiisu dhacayo isla markaana ay adkaatay inay heshiis cusub isku fahmaan kooxdiisa.
Jorginho ayaa ah mid aan u muuqan inuu ku haboon yahay waxa uu Lampard doonayo, Batshuayi ayaa u cararaya sababta ah in Werner kooxda kusoo biiray isagoo horeba uga dambeeyay Giroud iyo Abraham halka Emerson qudhiisu uu wakhti la’aan u baxayo.
Mahad shaarkey says:
Hadlaka lampard waa sax lkn waxa dhihi laha in Ingolo kante faraha laga qaado waa muhiim kante laceliyaa